Luhan ဟာ comeback လုပ်ဖို့ အရိပ်အမြွက်တွေ စတင်ပေးနေခဲ့တာလား | News Bar Myanmar
တရုတ်နိုင်ငံမှာအနုပညာအလုပ်တွေလုပ်ကိုင်နေတဲ့ Luhan ဟာ သီချင်းဖန်တီးမှုတွေအပြင် ဇာတ်လမ်းတွဲတွေပါလက်ခံရိုက်ကူးနေပြီး အလုပ်တွေဆက်တိုက်လုပ်ကိုင်နေသူဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကြားထဲမှာတော့ Luhan နဲ့ပတ်သက်ပြီး သိသာမြင်သာတဲ့လှုပ်ရှားမှုမျိုးမတွေ့ရတာကြောင့် ပရိသတ်တွေကတော့ လွမ်းဆွတ်ရင်း Luhan ရဲ့ Comeback ကို စောင့်မျှော်နေခဲ့ကြပါတော့တယ်။
ဒါပေမဲ့လည်း January လ ၇ ရက်နေ့တုန်းက Instagram မှာတင်ပေးခဲ့တဲ့ ပုံနဲ့ Caption ကြောင့် Comeback လုပ်တော့မှာလားဆိုပြီး တွေးဆခန့်မှန်းမှုတွေ ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ Instagram မှာ Follower မြောက်မြားစွာရှိတဲ့ Luhan ကတော့ နှစ်အစပိုင်းမှာပဲ Update လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။
ပုံလေးနဲ့အတူ “see you soon😎 😎 😎” (မကြာခင်တွေ့ကြမယ်)ဆိုတဲ့ Caption နဲ့တင်ပေးလိုက်တာကြောင့် ပရိသတ်တွေကြားမှာ တကြွကြွဖြစ်ခဲ့ရပြီး 2021 အတွင်း Comeback လုပ်တော့မယ်ထင်တယ်ဆိုပြီး မျှော်လင့်ချက်တွေမြင့်တက်လာခဲ့ကြပါတယ်။
ပရိသတ်တွေဟာလည်း Comeback ကိုမျှော်နေတဲ့အကြောင်း comment တွေ ပေးခဲ့ကြပြီး Luhan လေးကိုမြင်ရဖို့ စိတ်အားထက်သန်နေခဲ့ကြပါတော့တယ်။ Luhan ရဲ့ နောက်ဆုံးထွက်ရှိထားတာကတော့ EP “π-volume.4” ဖြစ်ပြီး December ၄ရက်နေ့ 2020 တုန်းက ထွက်ရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်။
Luhan ကတော့ ပရိသတ်တွေကို စနောက်ချင်လို့တင်ပေးလိုက်တာလား? တကယ်ကိုပဲ Comeback လုပ်တော့မှာမို့လို့ တင်ပေးလိုက်တာလား? ဆိုတာကိုတော့ Luhan ကိုယ်တိုင်ပဲသိမှာဖြစ်ပြီး အားပေးတဲ့သူတွေကတော့ အမျှော်ကြီးမျှော်လင့်နေကြပါပြီ။
Next SUGA အတွက် သီချင်းတစ်ပုဒ်ရေးစပ်သီကုံးဖို့ အချိန်ဘယ်လောက်တောင် လိုအပ်သလဲဆိုတော့... »
Previous « သားသမီးတွေရှိလာရင် Idol ဖြစ်လာဖို့အားပေးမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ Lay Zhang